चीनले हङकङ र भारतले गोवा फिर्ता लिन हुने, नेपालले सिक्किम, दार्जिलिङ फिर्ता लिन किन नहुंने ? - hamro Desh
चीनले हङकङ र भारतले गोवा फिर्ता लिन हुने, नेपालले सिक्किम, दार्जिलिङ फिर्ता लिन किन नहुंने ?
काठमाडौं । नेपाल र बेलायतबीच सुगौली सन्धि भएको २०० वर्ष पुगिसकेको छ । दुई सय वर्षअघि नेपाली शीर तत्कालिन अंग्रेजका सामु झुकेर नेपालको मेची र महाकाली पारीको जमिन गुमाउनु परेको थियो । तर सन् १९४७ मा बेलायतबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालले गुमाएको उक्त भू–भाग नेपालको हुनुपर्ने माग नेपालमा उठेको दशकौं भइसकेको छ । तर यो बहसलाई बलियो ढंगले राष्ट्रिय राजनीतिमा उठ्न सकेको छैन ।